Ndị ọrụ ụgbọ elu American Airlines na -enweghị mkpuchi ahụike na -enweta COVID nọ naanị ha
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị ọrụ ụgbọ elu American Airlines na -enweghị mkpuchi ahụike na -enweta COVID nọ naanị ha
Airlines • Aviation • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Safety • Tourism • Transportation • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Onye ọrụ ụgbọ elu American Airlines
Iwu ọhụrụ nke ụgbọ elu America pụtara na ndị ọrụ na-agbabeghị ọrịa COVID-19 ga-eji ụbọchị ọrịa nke ha oge ọ bụla ha kwesịrị ịpụ n'ọrụ. Nke a na -akwụsị njedebe ezumike pụrụ iche nke ndị America setịpụrụ mgbe coronavirus bidoro egwuregwu - maka ndị na -enweghị mmụọ, ya bụ.
Mgbe mbụ COVID-19 pụtara, a kpaliri ọtụtụ ụlọ ọrụ imepụta ezumike ọrịa maka ndị butere coronavirus.
Ugbu a nchịkwa nri na ọgwụ nwere ikike ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19, nke a na-agbanwe ihu ihe ụlọ ọrụ dị njikere imere ndị ọrụ ya bụ ndị họọrọ ịghara ịgba ọgwụ mgbochi.
Ọtụtụ ndị ọrụ ọhụrụ ụbọchị ndị a chọrọ ka ha gosipụta ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi iji mezue usoro ịkwụ ụgwọ.
Iwu ọhụrụ a ga-amalite na mbido Ọktoba maka ndị na-abụghị vaxxers, agbanyeghị, ndị ọrụ ụgbọ elu America nke gbara ọgwụ mgbochi ka iwu mkpuchi ọrịa na-ekpuchi ya, ha ekwesịghịkwa iji ụbọchị ọrịa nke ha wepu oge n'ọrụ. nke ọma.
Nke a yiri ka ọ na-ewu ewu n'etiti ndị na-anya ụgbọ elu, dịka ụgbọ elu Alaska gbochikwara ndị ọrụ na-enweghị isi iji ụgwọ COVID-19 pụrụ iche maka ọrụ efu n'ihi nje ahụ.
Ọbụghị naanị nke ahụ, ụgbọ elu Alaska na -enyekwa ndị ọrụ ya onyinye $ 200 maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ndị ọrụ ọhụrụ niile na -aga n'ihu ga -enwerịrị ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi tupu ewee ha n'ọrụ. Ụgbọ elu ahụ na-achọkwa ka ndị ọrụ niile na-anaghị agba ọgwụ mgbochi sonye na mmemme mmụta ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
N'ime ọnwa Las, United Airlines bụ ụgbọelu mbụ US chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi maka ndị ọrụ ụlọ ya niile. United nwere ndị ọrụ 67,000 na US na ndị ọrụ ọhụụ niile ga -egosi ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi kemgbe June nke 2021. N'ime ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ United, ndị ọrụ na -enweghị akwa ga -eyi mkpuchi ihu.
Frontier ụgbọ elu ga -achọkwa ka ndị ọrụ gbaa ọgwụ mgbochi nke ọma ka ọ na -erule Ọktoba 1 nke afọ a. A ga-achọ ndị ọrụ ahụ jụrụ ịghara ịgba ọgwụ mgbochi ka ha sonye na nnwale COVID-19 oge niile.
Ndị ọzọ ụgbọ elu na -anwa ime ka ndị ọrụ ha nweta ọgwụ mgbochi dịka ụlọ ọrụ ụgbọ elu Alaska mere site n'inye ihe mkpali dị ka ụgwọ ọnwa ọzọ ma ọ bụ oge ezumike.
Kedu ihe kpatara mgbanwe ndị a?
mgbe Nchịkwa Ọgwụ Federal (FDA) kwadoro Pfizer dị ka ọgwụ mgbochi, nke a meghere ọnụ ụzọ maka ụlọ ọrụ ịgbanwe iwu ha maka COVID-19, n'ihi na nke a na-abụkarị ihe kpatara ndị ọrụ na-achọghị ịgba ọgwụ mgbochi-na ọ nweghị ọgwụ mgbochi akwadoro.
Ndị ụgbọ elu ka na -achọ ka ndị niile nọ n'ụgbọ ahụ kpuchie nkpuchi maka oge ụgbọ elu ahụ, belụsọ mgbe ha na -eri nri ma ọ bụ na -a drinkingụ, n'ezie.